मार्समेलोको नाम बेचेर २ करोड ठगी | suryakhabar.com
Home आर्थिक मार्समेलोको नाम बेचेर २ करोड ठगी
on: १ पुष २०७४, शनिबार ०८:२९ In: आर्थिकTags: मार्समेलोको नाम बेचेर २ करोड ठगीNo Comments
काठमाण्डौ । विख्यात अमेरिकी डीजे मार्समेलो नआउँदा बुधबार मध्यरात नारायणहिटीपथस्थित ‘क्लब डेजाभुु रणभूमि बन्यो। मार्समेलोजस्तै देखिने हुलियाको खोजी भइरहेको छ। उनको नाम बेचेर दुई करोड ठगी गरिएको प्रहरीको दाबी छ।
नाइट क्लब डेजाभुमा पूर्वनिर्धारित समयमा ६ घन्टासम्म कुर्दा पनि डीजे मार्समेलो नआएको आयोजकले मध्यरात जानकारी दिएपछि दर्शकहरूले तोडफोड गरेका हुन् । भागाभाग भयो। उनलाई ल्याउने भन्दै महँगो टिकट बिक्री गर्नमा संलग्न भएको अभियोगमा सात जना अहिले ठगी अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा छन्।
शनिबारको अन्नपूर्णमा लेखिएको छ, महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दिवेश लोहनी भन्छन्, ‘मार्समेलोको वास्तविक नाम के हो भन्ने नै थाहा भएन। कसले भन्न सक्छ वास्तविक नाम ? प्रस्तुति दिने समयमा कहाँ थियो ? उसको वास्तविक हुलिया आदिबारे अनुसन्धानकै क्रममा छौं।
मार्समेलोले डेजाभुमा आफ्नो प्रस्तुति देखाउन नपाएकोमा क्षमा माग्दै गरेको ट्विटलाई प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै छ। ज्वरोका कारण बिरामी परेकोले डाक्टरको सल्लाहबमोजिम उपस्थित हुन नसकेको जनाउँदै उनले क्षमा मागेका छन्।
फुड प्वाइजनिङ भएको दाबी मार्समेलोले गरेका छन्। उनले ट्विटरमार्फत भने, ‘प्रस्तुतिका लागि आउन कोसिस गर्दा डाक्टरले आउन दिएनन्। स्वास्थ्य पहिला हुन्छ। बुझिदिनु भएकोमा धन्यवाद। आशा छ, तपाईंहरूसँग भेटन आउनेछु। उनी भेट्न कहिले आउँछन् ? त्यो निश्चित छैन तर प्रहरी भने उनको बारेमा अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणमा व्यस्त छ।
प्रहरीले आयोजक र क्लबका सञ्चालकसहित सात जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंमा अभियुक्तलाई शुक्रबार पेस गरिएकोमा म्याद थप लिई अनुसन्धान अघि बढाइएको एसएसपी लोहनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘लसएन्जलसमा पनि मार्समेलोको नाममा अपरिचित व्यक्तिलाई ल्याएर ठगिएको सूचना पाएका छौं। पुष्टि हुन बाँकी छ। त्यसको सिरिज नेपाल पनि हो कि भन्ने शंका छ।
अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘पक्राउ परेकाहरूले मार्समेलोलाई बोलाउन आफ्नो कुनै भूमिका नभएको बयान गरेका छन्। टिकट बेच्ने मात्र आफ्नो भूमिका भएको बताएर पन्छिन खोजेका छन्। क्लबका सञ्चालकहरू नेपाली अन्डर १९ क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान पृथु बास्कोटा, जयन श्रेष्ठ, मयंक खड्का, विशाल डाँगी, मिलन श्रेष्ठविरुद्ध ठगी मुद्दा दायर गरिँदैछ। त्यस्तै, आयोजकहरू रितेश मारवाडी र राजेश महर्जनलाई पनि सोही अभियोग लगाइने एसएसपी लोहनी बताउँछन्।
क्लबमा १५ सय दर्शक अट्ने क्षमता छ। तर, टिकट भने सात हजार बिक्री गरिएको अनुसन्धानका क्रममा खुल्न आएको छ। दुई हजार पाँच सयदेखि पाँच हजारसम्मको टिकट बिक्री गरिएको छ। एसएसपी लोहनी थप्छन्, ‘क्षमता अनुसारको टिकट बिक्री नगर्नु नै ठग्ने नियत हो। जुन कलाकार ल्याउँछु भनी जुन प्रकृतिले प्रचार गरियो तर ल्याउन नसकेर जनतालाई ढाँट्ने र ठग्ने काम भएको छ।
Tags: मार्समेलोको नाम बेचेर २ करोड ठगी
गोली किन्न दबाब बढाउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालय
१ पुष २०७४, शनिबार ०८:२९